Woza Friday: Ingoma Zeqembu leImpumelelo Shining Stars
Iqembu lomculo ele "Impumelelo Shining Stars"
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silethulela ingxoxo eyenziwe yintathelizindaba yethu uJoseph Njanji lomkhokheli weqembu le Impumelelo Shining Stars lona elisanda kukhipha i live DVD elengoma eziyithobamunwe munye.
Iqembu le Impumelelo Shining Stars libunjwe ngomnyaka ka 2001 mhla ziyisikhombisa kunyanga kaNkwenkwezi endaweni yeNqameni eGwanda.
Ngokuhamba kwesikhathi leliqembu lithuthe labhekisa amabombo edolobheni lako Bulawayo lapho elisebenze likhona kuze kube namhla lokhu.
Ekupheleni kwanyakenye leliqembu licindezele idlalade lohlobo lwe DVD embukisweni oqhutshelwe endaweni ye Bulawayo Theatre njalo umkhokheli weqembu le Impumelelo Shining Stars uOscar Siziba uthi lokhu bakwenze ngemva kokucelwa ngabalandeli babo.
Abanye abaculi lamaqembu ababekhona mhla kucindezelwa i live DVD ngabagoqela uDumi Nyongola, iqembu le JBCC Salem Mission Choir, umasganda uZinja Ziyamluma kanye loMehlokazulu.
UmfokaSiziba nguye yedwa osele kuqembu le Impumelelo Shining Stars kulabo ababumba leliqembu ngomnyaka ka 2001 njalo khathesi usebenza labathi uThembelani Ndlovu, Kwanele Moyo, Mduduzi Moyo, Njabulo Moyo, Kwanele Ncube, Khulekani Sibanda, Innocent Sibanda kanye lo Tiyambu Shoko.
Woza Friday: Iqembu le-Impulelo Shining Stars